Falanqeeyaan Qiimaha Qiimaha Macmiilka ee Meheraddaada si loo kordhiyo Haynta | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Falanqee Qiimaha Qiimaha Macmiilka ee Meheraddaada si loo kordhiyo Haynta
Falanqee Qiimaha Qiimaha Macmiilka ee Meheraddaada si loo kordhiyo Haynta
0 Daqiiqado 11 ayaa akhriyay
Aragti ahaan, qof kastaa wuxuu ku raacsan yahay in suurtagalnimada guusha ganacsi kasta ay ka weyn tahay marka ay ka shaqeyso xajinta macaamiisheeda.
Si kastaba ha ahaatee, waa wax caadi ah in la arko shirkado aan fiiro gaar ah siinin falanqaynta heerka qulqulkooda.
Miyaad si dhow ula socotay heerarka joojinta ganacsigaaga?
Ma ogtahay xeeladaha la isticmaali karo si loo dhimo?
Fahamka saamaynta cabbirkan ku leeyahay caafimaadka maaliyadeed ee shirkaddaada waxay samayn doontaa wax kasta oo isbeddel ah si ay u sii ahaato faa'iido iyo xoog suuqa muddo dheer.
Haddii aad wali wax su'aalo ah ka qabto mawduucan, boostadani waxay kuu sharxi doontaa waxaad u baahan tahay inaad ogaato si aad u ilaaliso xakamaynta macaamilka, oo ay ku jiraan mawduucyada soo socda:
Waa maxay Churn macmiilka?
Erayga "churn", oo aad ugu badan macnaha Suuqgeynta Dijital ah, ayaa markii hore loo adeegsaday tixraac dareere ah, oo macneheedu waxa weeye "in la dhaqaaqo ama la keeno si xoog leh".
Markaa, adduunka ganacsiga, macaamiishu waxay isku buuqayaan waa heerka burinta, ama ka tegista, lagu duubay saldhigga macaamiishaada.
Warshadaha qaarkood, tani waa halbeeg aasaasi ah oo lagu qiimeeyo guusha shirkadda maadaama ay si toos ah u saamayso dakhliga. Tani waa kiiska adeegyada is-diiwaangelinta.
Waxaa laga yaabaa in tusaalooyinka ugu fiican ee qaybta B2B ay yihiin SaaS (Software as a Service).
Macaamilka ugu dambeeya, waxaan ka fikiri karnaa shirkadaha teleefoonka iyo kuwa bixiya-TV-ga inay tusaale u yihiin adeegyada ugu caansan.
Fahamka xamaasadda macaamiisha iyo sida loo cabbiro waxay keenaysaa cashar muhiim ah: si loola socdo cabbirkan si sax ah, shirkaddu waa inay lahaataa kontarool hufan oo maamulka macaamiisha ah.
Marka la eego macnaha dhabta ah, shirkadu waa inay isticmaashaa a CRM wanaagsan iyo qalab kale lagama maarmaanka u ah in si sax ah loo duubo oo loola socdo iibsiga macaamilka iyo taariikhda xiriirka.
Waa maxay sababta loo cabbirayo curyaanka macmiilka?
Way caddahay in macmiilku la sii joogo shirkadda iyo in kale ay la xidhiidho dhawr arrimood.
Sidaas oo ay tahay, maamule kastaa waa inuu u qaataa in baabiinta ay sabab u tahay wax dhibaato ah oo iyaga laftooda ah oo qandaraaska ah.
Fikirkan waxa uu u ekaan karaa mid la buunbuuniyay marka hore laakiin u fiirsashada habkan waxa ay kaa caawin doontaa in aad ka feejignaato dhammaan hababka jira si aad u hubiso qanacsanaanta macaamilka.
Macaamiisha ku sii jiraya adeegaaga wakhti dheer waxay bixiyaan fursad ganacsi oo wanaagsan.
Ka dib oo dhan, sida ugu wanaagsan ee aad u garanayso baahiyahooda, in badan oo la waafajinayo dalabaadkooda iyo waxa laga filayo kooxdaadu waxay ahaan doontaa.
Tani waxay hubin doontaa waxtarka dalabyada aad sameyso.
Markaad si fiican u fahamto sababaha baabi'inta, shirkadu waxay noqonaysaa mid awood u leh inay samayso hagaajinta lagama maarmaanka ah ee hawlgalka oo ay sameyso qorshe hawleed hufan oo lagu saxo dhibaatooyinka la ogaado.
Hal shay ayaa la hubaa: falanqaynta qulqulka macaamiisha ayaa lama huraan u ah kuwa raadinaya guusha mustaqbalka fog.
Xusuusnow tan marka aad wax badan ka baranayso sababaha qallafsanaanta iyo xeeladaha aad ku ilaalinayso heer ammaan ah.
Waa maxay Farqiga u dhexeeya Churn iyo Churn Dakhliga soo noqnoqda ee bilaha ah?
Waxaa jira farqi fudud laakiin muhiim ah oo u dhexeeya churn iyo dakhliga soo noqnoqda ee bishii (sidoo kale loo yaqaan MRR Churn).
Halka kii hore uu qiimeeyay tirada macaamiisha tirtiray alaabtaada ama adeegaaga, dakhliga soo noqnoqda ee bishiiba mar wuxuu xisaabiyaa inta dakhli ee ka lumay baajintan.
Markaa, haddii shirkaddaadu leedahay hal qorshe oo keliya oo ay heli karaan dhammaan macaamiisha, uma baahnid inaad la socoto dakhliga soo noqnoqda ee bishii, maadaama ay muuqan doonto.
Laakiin haddii aad haysato wax ka badan hal badeeco ama qorshe, waxaa habboon in aad fiiro gaar ah u yeelato cabbirkan.
Tusaale ahaan, qiyaas in ganacsigaagu uu bixiyo 3 xirmo bishii. Mid baa $50, kan labaad $100, kan saddexaadna $250.
Luminta 5 macaamiil bishii gudaheeda waxay noqon doontaa mid aad u xun, laakiin ogaanshaha inay dhamaantood ka yimaadeen qorshaha ugu jaban waxay yareyn doontaa khasaaraha.
Dhanka kale, haddii inta badan ay macaamiisha ka yihiin xirmada ugu qaalisan, dhibaatadu way sii weynaan lahayd.
Sidoo kale, la socodka dakhliga dakhligu wuxuu kaa caawin karaa inaad hesho oo aad xalliso mashaakil gaar ah oo ku jira hal nooc oo xirmo ah adoon ka welwelin xulashooyinka kale.
Sidee loo Xisaabiyaa Qiimaha Churn?
Ka dib markii aan fahamno muhiimada ay leedahay falanqaynta qulqulka macaamiisha, waxaan hoos ugu dhaadhici karnaa qaybta la taaban karo, oo aan baranno sida loo xisaabiyo.
Ma jirto wax sir ah xisaabintan. Kaliya raac qaacidada soo socota oo ku dhufo natiijada 100:
Si loo fududeeyo fahamka, aan tixgelinno tusaale.
Ka soo qaad in shirkaddaada ay ku jireen 100 macaamiil bilawga bisha. 30 maalmood ka dib, waxaad ogaatay inaad leedahay 90 macaamiil.
Iyadoo la raacayo qaacidada sare, xogta tusaalahan, xisaabintu waxay u ekaan doontaa sidan:
➤Qiimaha rabitaanka = 10 (macaamiisha joojiyay)/100 (macaamiisha bilawga bisha) x 100
10/100 x 100
0,1 x 100
➤Qiimaha jeexjeexa = 10
Xaaladdan oo kale, heerka dhimistaadu waxay noqon doontaa 10%.
Sidee loo xisaabiyaa MRR Churn?
Waxaan sidoo kale ka hadalnay churn MRR.
Si aad u xisaabiso, waxaad u baahan tahay inaad qaadato celceliska tigidhka macmiil kasta oo kansalay. Habkani waa:
MRR churn = wadarta qaddarka bishii ay bixiyeen macmiishii baajiyay
Sidoo kale waa dhaqan wanaagsan in nambarkaan lagu cabbiro boqolkiiba si loo ogaado sida saxda ah inta uu le'eg yahay dakhligaaga bishii ay waxyeello u geysatay joojinta.
Xisaabintu waxay u ekaan doontaa sidan:
MRR waxay hoos u dhigtay % = wadarta cadadka bisha ee kuwa buriyay/wadarta dakhliga bishii u danbaysay
Maskaxda ku hay: tani waa falanqayn muhiim ah oo lagu hagaajinayo dadaallada la filayo, maadaama ay gacan ka geysaneyso dheellitirka maalgashiga ay tahay in lagu jiheeyo nooc kasta oo istiraatiiji ah.
Si kale haddii loo dhigo, waxaad ku xiran tahay qiimeynta heerka jahawareerka si aad u horumariso xajinta macaamiisha, iibinta ka dib iyo xitaa xeeladaha iibka ka hor.
Ma Jiraa Qiimayn Ku Fiican?
Adduunka ku habboon, maareeye kasta riyadiisu waa inuu macaamiishu hoos ugu dhaadhacdo eber.
Qofna ma jecla inuu arko macaamiisha ka tagaya shirkadda, sax?
Saamaynta tooska ah ee dakhliga ka sokow, waxaa jirta fursad ah in macaamiishii hore uu ku faafiyo sawir xun oo shirkadda ah, taas oo wiiqi doonta sumcadda iyo sumcadda ay ku leedahay suuqa.
Laakin doorsoomayaal badan ayaa ciyaarta ku jira, waana wax aan macquul aheyn in 100% la ilaaliyo macaamiisha.
Markaa, xeerka guud waa: iska hubi in heerka dhimistaadu had iyo jeer u hooseyso sida ugu macquulsan.
Maadaama heerka burinta macaamilka ay la xiriiri karaan arrimo badan, way adagtahay in la go'aamiyo qiimaha go'an ee qiimaha.
Qaybaha qaarkood, sida SaaS, oo la shaqaynaysa qiimayaasha agagaarka 5% ilaa 7% sanadkii waa suurtagal.
Dabiici ahaan, adeegyada u baahan qandaraasyo waqti-dheer ah, oo tigidh sare leh waxay u muuqdaan inay leeyihiin heerar hoose.
Xiritaanka heshiiska (iyo sidoo kale baabiinta qandaraaska) badanaa waxay qaadataa waqti waxayna ku lug leedahay dhowr qof, markaa beddelashadu waa yar tahay.
Suurtagal ma tahay in la gaaro xumaanta xun?
Haa, waa suurtagal. Laakiin waa maxay xumaanta xun?
Waxay dhacdaa marka ganacsigu uu maareeyo inuu kordhiyo iibka ilaa saldhigga macmiilka ee jira, dakhliguna wuxuu ka badan yahay qaddarka lumay ee burinta.
Aan soo qaadano tusaalaha ugu horeeya, kaas oo aan soo qaadanay markii aan ka hadlaynay MRR churn.
Shirkaddu waxay lumisay 5 macaamiil, dhammaan macaamiishii qorshaha $50.00. Khasaaraha guud waa $250.
Laakiin isla bishaas, shirkaddu waxay ku guulaysatay inay hesho 3 macaamiil si ay uga horumariyaan qorshaha $ 100.00 oo ay noqdaan ka ugu qaalisan, kaas oo qiimihiisu yahay $ 250.00.
3-dan iib ee macaamiisha hadda jirta, dakhligu wuxuu kordhay $450.00 - in ka badan $250.00 ee la baajiyay.
Tani waxay ka dhigan tahay dareen xun.
Waa maxay casharka halkan? Kordhinta celceliska tigidhku waa hab fiican oo lagu dhimo qulqulka MRR.
Maxaa Sababa in Macaamiisha ay joojiyaan Xiriirkooda Shirkad?
Fahamka waxa ku socda madaxa macaamiisha mar walba ma fududa, gaar ahaan marka aad u malaynaysay in wax walba ay fiican yihiin oo ay ka tageen alaabtaada ama adeeggaaga.
Wax faa'iido ah ma leh in lagu dhex qabsado xayndaabyada ama gabi ahaanba la iska indhatiro go'aanka.
Taa lidkeeda: waa muhiim in shirkaddaadu ugu yaraan isku daydo inay fahmaan maxaa keenaya in macaamiisha ay joojiyaan xiriirka.
Kaliya markaas ayaad awoodi doontaa inaad dib u celiso xaaladda oo aad ka hortagto wax la mid ah inay ku dhacaan dadka kale.
Sababaha ugu badan ee macmiilku u joojiyo xidhiidhka shirkad waa kuwan soo socda:
1. Bixinta wax ka yar wixii loo ballan qaaday
Ballanqaadka wax walba iyo wax yar oo dheeraad ah oo kaliya in la xiro iibka ayaa laga yaabaa inay u ekaato fikrad wanaagsan marka rajada la'aanteed, iyo hadafka bisha aan weli la gaarin.
Laakiin hab-dhaqankani waa mid aan waxtar lahayn sababtoo ah natiijadu ma noqon karto wax aan niyad jabin.
Mar dhow ama hadhow, macmiilku wuxuu ogaan doonaa in qiimaha la keenay aanu ku habboonayn wixii loo ballanqaaday.
Haddii tani ay tahay kiiska shirkaddaada, beddel dhaqankaaga iibka isla markaaba.
Macaamiisha ka quusta ballamaha beenta ah dartiis aad bay u niyad jabaan waxayna sameeyaan qodob ay kaga hadlaan waaya-aragnimadooda xun mar kasta oo ay fursad u helaan.
2. Feejignaan la'aan si faahfaahsan
Faahfaahinta ayaa wax walba ka duwan, gaar ahaan alaabooyinka leh qiimaha tigidhada sare oo ay isticmaalaan waxa loogu yeero suuqa ganacsiga, oo ka kooban shirkado waaweyn.
Marka macaamilku lacag badan ku bixiyo xalkaaga, waxay filayaan wax walba inay noqdaan kuwo qumman.
Dhibaatooyinka wax qabadka, karti la'aanta, iyo hababka xafiiseedku waa qaar ka mid ah qodobbada u burburin kara khibradda macmiilka si tartiib ah oo qarsoodi ah.
Dhibaatooyinka yaryar ayaa is urursada oo noqda dhibaato aan la cafin karin mar ay marayso, waxa kaliya ee hadhayna waa in la raadiyo xal ka duwan suuqa.
3. Isbeddelka baahida macaamiisha
Sida shirkaddaadu ugu baahan tahay inay si joogto ah ula qabsato oo ay u horumarto si ay ugu sii jirto suuqa, macaamiishaaduna way isbeddelaan.
Xaaladaha qaarkood, waxaa laga yaabaa inay baabi'iyaan qandaraaska sababtoo ah ururkoodu wuxuu u baahan yahay wax aadan bixin karin.
Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in nooca adeegga aad bixiso aan loo baahnayn.
Suurtagalnimada kale waa in macmiilku aanu haysan lacag uu ku siiyo.
Furaha, kiiskan, waa in la ogaado in isbeddelka baahidu uu dhab ahaantii ka dhigayo mid aan suurtogal ahayn in la sii wado wax iibsigaaga ama kaliya u baahan yahay xal ka duwan kan faylalkaaga.
4. Dhamaadka ganacsiga
Had iyo jeer waxay noqon kartaa in macmiilka su'aasha laga hadlayo uu ugu dambeyntii joojiyo hawsha u baahan isticmaalka alaabtaada.
Tusaale ahaan, haddii ay dhacdo shirkad kacday, ma jirto wax faa'iido leh in la isku dayo in qofku dib u eego go'aanka.
Waxa kale oo ay muujinaysaa in ay ahayd arrin dibadda ah, oo aanay ahayn dhibaato ganacsigaaga, taas oo sababtay joojinta.
Had iyo jeer waa sax in loo qaato in dhibaatadu ay tahay dhinacaaga qandaraaska, laakiin waa lagama maarmaan in la raaco kiis kasta si aad u hubiso goorta mas'uuliyadda adiga tahay, iyo marka aysan jirin wax la qabanayo.
Sidee loo Yareeyaa Shuruucda Macmiilka ee Shirkaddaada?
Dhib malaha waxa uu yahay heerka kaniisada ganacsigaaga, ujeedadu had iyo jeer waa in la dhimo.
Markaa, ma jirto wax ka fiican inaad aragto qaar ka mid ah talooyin wax ku ool ah oo kaa caawinaya hawshan.
Waxaan taxnay wax aan ka yarayn 7 fal oo kaa caawin kara inaad taas sameyso. Haddii aad si dhow ula socoto, waxaad arki doontaa hoos u dhac degdeg ah oo macaamiisha ah.
1. Faham sababta macaamiishaadu u kansalaan
Talaabada ugu horeysa ee si wax ku ool ah loo dhimo qulqulka waa in la fahmo sababaha macaamiishaadu u kansalaan.
Tani waxay noqon kartaa caqabad adag.
Sababaha ugu caansan waxay u dhexeeyaan arrimaha aasaasiga ah, sida lacag la'aanta si loo maalgeliyo, iyo kuwa si toos ah ula xiriira adeegga la bixiyo.
Waa caadi in la tixgeliyo dhowr sababood oo uu qof baajin karo. Markaa ha ka warwareegin inaad tixgeliso in sababta joojinta ay tahay ku qanacsanaan la'aanta macaamilka ee shirkaddaada.
Waxa muhiimka ah ayaa ah in shaqaalahaagu ay yihiin kuwo wax ku ool ah oo degdeg ah si ay u ogaadaan sababta macmiilku u raadinayo doorasho kale.
Xiriir degdeg ah oo degdeg ah ka dib joojinta ayaa ah sida ugu wanaagsan ee tan loo sameeyo.
2. Aqoonso macaamiisha ay u badan tahay inay baxaan
Cabbiraadda kale ee muhiimka ah ee hoos loogu dhigayo calaacalka macmiilka waa aqoonsiga macaamiisha ay u badan tahay inay ka tagaan shirkadda.
Haddii aad ku guulaysato hawshan, fursadaha shirkadu inay ka fogaato dhibaatada ayaa aad u badan, gaar ahaan haddii sababaha ay yihiin kuwo aad gacanta ku hayso, sida adeegga oo xumaada.
Taladu waa in aad ururiso macluumaadka ugu badan ee suurtogalka ah ee ku saabsan macaamilka oo aad daawato calaamado muujinaya in wax caqabad ku noqon karaan xiriirka shirkadda.
Ficil ahaan, tani waxay u baahan tahay la socoshada isdhexgalka tooska ah, sida kororka degdega ah ee codsiyada taageerada.
Intaa waxaa dheer, waxaa habboon in lala socdo waxa ay ka sheegaan summadaada shabakadaha bulshada, Dhibcaha Horumariyaha Net (NPS) iyo tilmaamayaasha kale ee qanacsanaanta.
Shaqada iibka ka hor ee wanaagsan, waxaa suurtagal ah in la ogaado xitaa ka hor inta aan la xirin iibka haddii taasi tahay macaamiil u baahan adeegyo gaar ah.
3. qaabeeya kooxda Guusha Macmiilka
Ma jirto wax faa'iido ah oo kaliya in la fahmo sababaha burinta iyo macaamiisha ay u badan tahay inay kansalaan.
Waxaad u baahan tahay hab degdeg ah oo aad ku xalliso dhibaatooyinkan, tanna badanaa waxa lagu gaadhi karaa kooxda Guusha Macmiilka.
Doorka xirfadlaha ee aaggan waa inuu saadaaliyo dhibaatooyinka iyo in la hubiyo in macaamiishu ay mar walba natiijooyin wanaagsan ka helaan alaabta ama adeegga ay soo iibsadaan.
Macmiilku ma leeyahay rukhsad adeegaaga laakiin ma isticmaalin sifo kasta oo uu xaqa u leeyahay?
Way fiicantahay in si firfircoon loo caawiyo intii la sugi lahaa inay burinayaan heshiiska.
4. Ku dar qiimaha khibradda macmiilka
Dabcan, aragti ahaan, qof kastaa wuxuu rabaa inuu siiyo waxa ugu fiican macaamiishiisa.
Laakiin ka waran kooxda Taageerada Macmiilka ee aan diyaar u ahayn inay xaliyaan dhibaatooyinka?
Iyo kooxda adeegga macaamiisha oo aan soo bandhigi karin xal dhab ahaantii ka tagaya macaamiisha ku qanacsan?
Marka laga soo tago in la lahaado xirfadlayaal u heellan Guusha Macaamilka, isla qiyamka waa in lagu dhaqmaa heer kasta oo shirkadda ah taas oo qayb ka ah dhaqanka macaamiisha udub dhexaad u ah.
Sidan, diiradda ayaa had iyo jeer ku jiri doonta waayo-aragnimada la siiyo macaamiisha, waligoodna ma heli doonaan sabab ay ku raadiyaan xal kale.
5. Hubi inaad dhagaysato kuwa adeegsada adeega
Aasaasayaasha iyo maareeyayaasha ganacsigu wax badan ayey ka yaqaaniin suuqooda iyo wax soo saarkooda.
Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan wax lala barbar dhigi karo macaamiisha ugu dhiirigelinta badan ee shirkaddaada.
Faahfaahinta hawlgelinta ee la xidhiidha inta badan ma ogaan karaan kuwa ka shaqeeya alaabta oo aan ka arki karin indhaha macaamiisha.
Laakiin kuma filna in la haysto qalab lagu soo qabto jawaab celin haddii shirkadu aanay si habboon ugu fiirsan.
Had iyo jeer way wanaagsan tahay in la xasuusto in warbixinadu ay muhiim yihiin, laakiin kaliya haddii aad haysato qof raba inuu falanqeeyo xogta.
Habraaca Automation-ka ayaa macno samaynaya kaliya haddii kooxdu ay adeegsato sirdoonkeeda xagga adeegga waxa run ahaantii muhiimka ah - ku qanacsanaanta macaamilka - halkii ay qaban lahayd hawlo soo noqnoqda.
6. Isku hagaaji filashooyinka
Kuwa ka shaqeeya adeegyada soo noq-noqda, iibka si wanaagsan loo sameeyay waa mid daboolaya baahida macaamiisha.
Sidaa darteed, ha ku dhicin dabinka raadinta tigidh sare oo ku saleysan ballanqaadyo been ah.
Mustaqbalka fog, natiijadu waa masiibo sababtoo ah macaamiishu kaliya ma baabi'in doonaan qandaraaska laakiin sidoo kale waxaa looga tagi doonaa sawir xun oo shirkaddaada ah.
Iyadoo la tixgelinayo sida ay u fududahay maalmahan in la wadaago khibradaha, khataraha ayaa ah kuwo aad u weyn.
Suurtagal ma aha in laga fogaado qallafsanaanta, laakiin is waafajinta filashooyinka ayaa ah bilow wanaagsan oo lagu dammaanad qaadayo xiriir wakhti dheer ah inta badan macaamiishaada.
7. Qaado tallaabo ku saabsan soo jeedinta la helay
Tani waa mid ka mid ah cabashooyinka ugu weyn ee ay sameeyaan macaamiishu: shirkaduhu ma tixgeliyaan jawaab celintooda.
Badanaa, kaliya si loo dhimo kharashaadka, xitaa way iska indhatiraan jawaab celinta dhibaatooyinka soo noqnoqda.
Xataa haddii ay suurtogal noqon weydo in arrinta lagu xalliyo muddada gaaban, ka dhig mudnaanta koowaad oo si taxadar leh u falanqee waxa la qaban karo.
Maskaxda ku hay in xallinta mashaakilaadka aysan ahayn kharash ee waa maalgashi. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad si aad ah u yareyso qulqulka waxayna xitaa kordhin kartaa faa'iidadaada mustaqbalka.
Isku soo wada duuboo: Curinta macmiilku aad bay muhiim u tahay tilmaame in dhinac laga tago
Ka dib oo dhan, xogta aad daaha ka qaadi karto waxay saamaynaysaa dhinac kasta oo ganacsiga mustaqbalka dhow iyo kan fogba.
Isticmaal talooyinka halkan lagu arkay oo bilow falanqayntan hadda.
Ma ogtahay in Suuqgeynta Mawduucadu ay noqon karto xulafo awood leh si loo dhimo jahawareerka?
Anigoo taas maskaxda ku hayna, waxaan diyaarinay qiimeyn degdeg ah si aan kuugu hago habka abuurista iyo qaabaynta kaaga Xeeladda Suuqgeynta Maaddada. Iska hubi!
Sida Loogu Helo Taageerayaal TikTok bilaash ah: 11 Talo oo Sare
Oppo waxay furtay diiwaangelinta ColorOS 12 Barnaamijka Helitaanka Hore
Sida loogu daro Ilaalinta CAPTCHA WordPress
Khalkhal geli marinka oo dardar geli fursadaha dakhliga
Guurguuro, soco, orod shakhsiyaynta wakhtiga-dhabta ah
5 siyaabood oo kooxdaada CX ay u wanaajin karaan dadaalka suuqgeynta nuxurka
Hagaha 8-tilaabo ee Cajiibka ah ee Samaynta Waxyaabaha Fiidiyowga ah ee beddela